अझै हावाहुरी चल्छ, सतर्क रहनुहोला : मौसमविद् - समृद्ध नेपाल
उनका अनुसार अझै एक/दुई घण्टासम्म हावाहुरी चल्ने छ । यो हावाहुरी प्रि-मनसुन एक्टिभिटीअन्तर्गत नै चलेको हो । अझै एक/दुई घण्टा हावाहुरी चल्नेछ वर्षा भएपछि यो विस्तारै घट्दै जान्छ मौसमविद् मानन्धरले भनिन् ।
उनले शुक्रबार अपरान्ह पनि देशका केही भागमा हावाहुरी चल्ने बताइन् । भोलि पनि अपरान्हपछि यस्तै हावाहुरी चल्नेछ । तर ठूलो चल्दैन उनले भनिन् । अहिले प्रदेश१ वाग्मती गण्डकी सुदूरपश्चिम र कर्णालीका पहाडी भूभागमा पनि हावाहुरी चलेको पनि उनले बताइन् ।
स्थानीयस्तरमै निर्माण वायु दक्षिणबाट विस्तारै उत्तरपूर्वतिर जाने पनि उनको भनाइ छ । त्यस्तै विभागले हावाहुरीका कारण घरका छाना उडाउने रुख भाँचिनेलगायतका दुर्घटना निम्तिन सक्ने भन्दै सर्वसाधारणलाई बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ ।
दैब पनि कति निस्टुरी आयो टप्प टिपि लग्यो मिति पुग्यो टारेर टर्दैन त्यो RIP साथी !
भारतमा अक्सिजन आपूर्तिमा समस्या हुँदा २२ बिरामीको मृत्यु !
मुक्तिनाथमा ड्रोन क्यामेरा उडाउँदै गरेका एक विदेशीसहित ३ जना नेपाली पक्राउ !
सम्पत्ती बोकेर घर छाडेकी पत्निको बाटो हेर्दै क्षेत्र प्रसाद !
जब केटाले केटालाई नै सिन्दुर हालेर बिहे गरे, पण्डित परे तिन छक्क !
२२ वर्षदेखि हिम पाइपमा बस्दै यो जोडी, थाहा पाउदा भावुक बनाउने सबै !
पठाओ राइडरले अफलाइन ट्रिप गर्न थालेपछि राइडर र ट्याक्सी चालक बीच झडप !